မိန်းမတွေအကြောင်း ( အတင်းပြောခြင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိန်းမတွေအကြောင်း ( အတင်းပြောခြင်း )
မိန်းမတွေအကြောင်း ( အတင်းပြောခြင်း )
Posted by မြသဲ ( 17082011 ) on Oct 1, 2013 in Creative Writing | 43 comments
အင်းကျုပ်တို့မလဲ အခုတလော ဒုက္ခများချက်။ ဘယ်လိုဒုက္ခလဲဟုတ်လား။ တခြားဟုတ်ရိုးလား ကျုပ်တို့ရွာ မန်းဂေဇက်ပေါ့တော်။ သဂျီးဘာလုပ်တယ်မသိဘူး တချိန်လုံးရွာတံခါးပိတ်နေတာကလား။ :buu: ရွာတံခါးပိတ်ပြီး သူကရွာထဲမယ်ဘာလုပ်နေတယ်တော့ ကျုပ်လဲမသိပါဘူးတော်။ ထားပါလေအဲဒါသူ့ကိစ္စ။ ကျုပ်ကလဲ ကျုပ်ကိစ္စနဲ့ကျုပ်ပေါ့တော်။ ကျုပ်ကိစ္စဆိုတာကတော့ ကျုပ်ကရွာထဲဝင်ချင်တာတော့။ စပ်စုချင်တာ၊ အတင်းပြော ချင်တာရယ်။ အဲပြောရအုံးမယ်။ ကျုပ်ဆိုတာကတော့ ဒီမန်းဂေဇက်ရွာထဲကရွာသူ လမ်းဆုံကဂျမ်းဘုံပေါ့ရှင်။ ဟိုလူရီးကိုထွန်းနောင်ဆိုတဲ့ ဂျင်မလေးဂျမ်းတော့ဟုတ်ဘူးရယ်။ ကျုပ်ကတော့ရွက်ကြမ်းရေချိုလေးပေါ့တော် ( ဒါကတော့ကွကိုယ် ထင်တာပေါ့နော်ရယ် )။ ထားပါလေ။ ရွာထဲဝင်မရတာနဲ့ကျုပ်မလဲ အာသာပြေဆိုပြီး ရွာ့အပြင်ထိပ်နားမယ်ရှိတဲ့ ဇရပ်ကတုံးလေးဆီ ပြေးရသာပေါ့တော်။ အဲမှာတော့မဆိုးပါဘူး။ ရွာထဲဝင်ရတဲ့ရွာသူားတွေရော ဝင်မရတဲ့ရွာသူားတွေကော စုံပါ့တော်။ သတင်းပလင်းအတင်းအကုန်သိ ရသပေါ့ရှင်။ ဒါပေသိ သိကြတဲ့အတိုင်းဇရပ်ကတုံးလေးဆိုတော့ ဘယ်သူမှကြာကြာရွာနေပြည်ထိုင်ရှိတာ ဟုတ်ဘူးလေတော်။ ခဏတဖြုတ် စကားလေးတခွန်းနှစ်ခွန်း ဘာစားနေသည် ဘာဖတ်နေသည် အသီးကွဲနေသည် မင်ဂါချောင်ဒေါ့မည် ဒီလောက်ဒီလောက်ကလေးဘဲကိုး။ အဲတော့ ကျုပ်ကလဲအားမရဘူးတော်ရေ။ အားရပါးရကို အတင်းပြောချင်တာကော။ အဲဒါနဲ့ကျုပ်ရွာနားမယ် ရစ်သီရစ်သီနဲ့ချောင်းနေတုန်း ဗြုန်းဆို ဦးမိုက်ဆိုတဲ့လူရီးက အတင်းကြိမ်စင်္ကြာနဲ့ရိုက်ခေါ်တော့တာပဲ။ ရွာသူားတွေပြန်လာဆိုတော့ နဂိုကမှလာချင် နေတဲ့သူဆိုတော့ ဂျမ်းဘုံတို့အပြေးအဖြန်းပြန်လာတာပေါ့ရှင်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ရွာ့ထမင်းဆိုင်မှာဗိုက်ဝင် ဖြည့်ရသေး။ ပြီးတော့ ဟိုအချိုပွဲဆိုင်မှာ အချိုဝင်တည်းပြီးမှ ရွာထဲပါတ်ရသပေါ့။ အဲမှာ ကျုပ် မိဂျမ်းဘုံပြော ချင်တာလေး အတင်းပြောမလို့တော့။ ကျုပ်ပြောမယ့်အတင်းကတော့ မိန်းမတွေအကြောင်း ပေါ့ရှင်။ မိန်းမတွေများမကောင်းချက်။ အချက်။ အဲတော ့တော်တို့ကမေးအုံးမယ်။ နင်ကကောမိန်းမ မဟုတ်ဘူးလားလို့။ ဟုတ်ပါ့တော် ကျုပ်ကမိန်းမမှ စစ်စစ် စစ်စစ်နဲ့တောင်မည်သေး။ ဒါပေသိ အဲဒီမိန်းမအတွင်းစိတ်သဘောကို ကျုပ်တို့မိန်းမချင်းပဲသိသမှုတ်လား။ ဟိုပုရိသခေါ်ခေါ်နေကြတဲ့ယောင်္ကျား တွေမသိဘူးလေတော်ရေ။ အဲတော့လဲကျုပ်က သူတို့သိအောင် ကိုယ့်အကြောင်း ကိုအတင်း ပြောရတော့သပေါ့တော်။ :hint: အခုကတော့မိန်းမတွေမကောင်းကြောင်းအတင်းပေါ့တော်။ နောက် တခါမှ ယောင်္ကျားတွေ မကောင်းကြောင်း အတင်းပြောမယ်တော့။ အခုကတော့ မိန်းမတွေအလိမ်ကြိုက်တတ် တာပြောမတော့။ မိန်းကလေးရွယ်ရွယ်တွေ များရည်းစားရကြပလားဟေ့ ဆို ခေါင်းကိုမော့ထား တာကလား။ တလောကလုံးသူသာလျှင် ကံအကောင်းဆုံးဆိုပြီး။ သူ့ချစ်ချစ်ကိုလက်ကလေးချိတ်ကာ ချိတ်ကာနဲ့ မော့တော့မော့တော့ပေါ့တော်။ ကျုပ်ဖြင့်ကြည့်မရပေါင် သူ့ငနဲကို။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်လဲကျုပ်ဟာ ကျုပ်မော့နေ ရသကိုး။ အားဘူးတော်။ အောင်မယ်ရှိသေး မိန်းကလေးတွေ သူ့ရီးစားကိုပါဝါပြတာ။ ဆေး လိပ်မသောက်ရ ဆိုပြီး မီးခြစ်ဘူးသိမ်း၊ ဆေးလိပ်သိမ်း ( ဟိုကဖြင့် ဝယ်ထားတာ ဒါဇင်လိုက်၊ တခုလောက်ပေးလိုက်နားအေးရော ) ဒါကိုမချောတွေကမသိ ငါ့စကားနားထောင်တယ်ဆိုပီတိတွေဖြစ် လို့ပေါ့တော်။ ကျုပ်လဲပါသပေါ့။ ဟိုငတိတွေကကွယ်ရာမှာရီနေမလားတောင်သိပါဘူးတော်။ ကျုပ်တို့မိန်းမတွေ အချက်ပြောပါတယ်။ နောက်စုံတွဲလိုက်လက်ကလေး ချိတ်လို့လမ်းလျှောက်လာတာမယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကောင်မလေးချောချောလေးလျှောက် လာတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်မှ တော့ကိုယ်လဲမြင်သူလဲမြင်ပေါ့။ ဒါကိုမချောကသူ့ချစ်ချစ်ကိုပြသနာရှာ တော်မူလေရဲ့။ အမှု့ကဘာတုန်း ဆိုတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကကောင် မလေးကိုကြည့်မှု့တဲ့။ မကြည့်လဲမြင်နေရတာကို မိန်းမတွေများသက် သက်မဲ့ပြသနာရှာတာပြောပါတယ်။ စကားနာလေးထိုးလိုက် မျက်ရည်လေးကျလိုက်နဲ့ ဟိုကလဲပြူးပြာနေ အောင်ချော့သပေါ့။ နောင်ကိုမျက်စိ မှိတ်လျှောက်ပါမယ့်အကြောင်းပေါ့။ ကဲအရပ်ကတို့စဉ်း စားများကြည့်ပါအုံး၊ ဒီလောက် ချိုင့်တွေကျင်းတွေ အပေါက်တွေ ဈေးသည်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လမ်း ဘယ်လိုမျက်စိ မှိတ်လျှောက်မတုန်း မတော်ပြုတ်ကျ တက်နင်းကျိုးပဲ့ကုန်မပေါ့။ ဒါလဲပဲမချောတို့ကယုံတာပဲ။ အဲလိုလေးလဲချော့ရော ပြုံးသွားပုံများတော့ အညာခံနေတာ၊ ”အ“ ချက်ပြောပါတယ်မိန်းမတွေများ။ ခက်တယ်ခက် တယ်တော့။ နောက်တော့ ညားသွားကြရောဆိုပါတော့ရှင်။ အဲမှာလဲ မိန်းမများပြသနာတမျိုး ရှာကြပြန်ရေတော်ရေ။ ဘာဒဲ့ အရင်ရည်းစားဟောင်းတွေ နဲ့ပြသနာရှာပါလေရော။ ကိုယ့်ယောင်္ကျားများနဲနဲ လေးစကားမမှားလိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲနေကြည့် လိုက် အောင်မယ်လေးတော်အရင်ရီးစားဟောင်းကို လွမ်းနေတာ လား နောင်တရနေတာလားနဲ့စကားနာထိုး မျက်ရည်တွေကျ ထုနှက်ပြသနာရှာသပေါ့။ မိန်းမ တွေများ မနပ်ချက်တော်။ ကိုယ်ကပထမဆုံး မဖြစ်ရလဲ နောက်ဆုံးဖြစ်ရတာကျေနပ်စရာပေါ့တော် ဟုတ်ဘူးလားတော့။ ကိုယ်ကအလည်ကလူမဖြစ်ပြီးတာပဲ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာဘယ်လောက်များ များကိုယ့်နောက်မှာ မရှိဖို့အရေးကြီးတာကို နားမလည်ချက်၊ “အ” ချက်တော့ပြောမနေပါနဲ့။ မင်းကလွဲရင်ဖွဲစကွဲချည်းဆိုတာယောင်္ကျားတွေ သူတို့ရီးစားတွေပြောနေကျပါတော်။ ကိုယ်ကအဲဒီဖွဲစကွဲထဲမပါတာတော်ရောပေါ့။ ဟုတ်ပေါင်ပြသနာမရှိပြသနာရှာပုံပြောပါတယ်။ ဟိုကလဲချော့ပေါ့။ အဲဒါကညားခါစအခြေအနေပေါ့တော်။ အဲလိုနဲ့နေကြလိုက်တာ ကလေးတွေရ၊ ကလေးတွေအတော်အသင့်အရွယ်ရောက်လာတော့ စီးပွားရေးလဲတည်ငြိမ်လာတာပေါ့။ အဲကျတော့လဲ မိန်းမတွေများ တစခန်းထလာပြန်ရော။ အိမ်ထောင်သက်ကလေးရလာတော့ ရီးစားဟောင်းတွေဘာ တွေလဲပြသနာမရှိတော့ပါဘူး။ သူတို့ရီးစားဟောင်းတွေနဲ့တောင် စကားစမည်ပြောလို့။ အေးလို့ပေါ့။ အဲမှာယောင်္ကျားကများ ကိုယ့်ကို ကြင်ကြင်နာနာနဲနဲလေးများဆက်ဆံလိုက်မိပြီဆို မိန်းမတွေပြသနာရှာ တော့တာပဲ။ ဟင်ဒီလူရီးထူးထူးခြားခြားငါ့ ကိုကြင်နာနေပါလား။ ဒင်းမဟုတ်တာတခုခုလုပ်ထားပြီ၊ ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုပြီးပြသနာရှာတော့တာပဲ။ အဲတော့ခက်သပေါ့တော်။ ညားခါစက မကြင်နာလို့ ပြသနာရှာ၊ အိမ်ထောင်သက်ကြာတော့ကြင်နာလို့ဆိုပြီးပြသနာရှာ အဲတော့ခက်သပေါ့။ ဟိုကလဲ ကိုယ့်အကြိုက်လိုက်ပြီး အဆင်ပြေအောင်ပြောရတော့တာပေါ့။ အဲမှာ မိန်းမတွေအလိမ်ခံနေရတာပဲတော့။ ကျုပ်တို့မိန်းမတွေများ ”အ“ ချက်ပြောပါတယ်။ ဒါလေးဒါလေးကျုပ်အတင်းပြောချင်တာက။ အဲတော့ကျုပ်ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုရွေးပြီးပြီပဲ ကျေနပ်လိုက်ပြသနာမရှာနဲ့။ အဲဒါဆိုအလိမ်မခံရဘူး။ အဲပြသနာရှာရင်တော့အပေါ်ကပြောသလို အလိမ်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာပဲတော်။ ကဲကျုပ်သွားတော့မတော်။ ပြောချင်ရာလဲပြောပြီးပြီ။ ရွာထဲပါတ်စပ်စုလိုက် အုံးမတော်။ နောက်များမှ တော်တို့ယောင်္ကျားတွေအကြောင်းအတင်းပြောတော့မတော်။ :hint:
ခွဒစ်တူ ရေးနည်းရေးဟန် မွန်မလေးလုံလုံ ( ရေးနည်းရေးဟန် တိုက်ရိုက်ကူးချတီ )
အကြောင်းအရာ။ ။ ဟိုတနေ့က အတွင်းသိအစင်းသိ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖေါ်နေကျ အပေါင်းအသင်းစုံတွဲများ စုပြီးသွားစားတဲ့အချိန်တုန်းက အရင်ကအကြောင်းလေးတွေအမှတ်တယပြန်ပြောဖြစ် ပြန်ရီဖြစ်ကြတာ လေးတွေကို ရေးထားတာပါ။ အဲတုန်းဆီကတော့ အားလုံးအားလုံးစိတ်ညစ်စရာတွေပေါ့။ အခုတော့ ရီစရာတခုအနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြန်ပြောဖြစ်ကြတာလေးတွေရေးထားတာပါ။ ဒါကတော့ သူတို့မိန်းမတွေ ပြသနာရှာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့။ ကိုယ်လဲပါသပေါ့။ နောက်တခါတော့ သူတို့အလွဲလေးတွေအမှားလေးတွေ မိန်းမတွေဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာလေးလာပါမယ်။ :buu:
အောင်မယ်လေး ကိုဆာမိရေ ကျွန်မတော့ ခံရတော့မယ်မှတ်တယ် အာဟိ ပြေးထားမှ။ ဘာရယ်မဟုတ် ရွာထဲစာတပုဒ်လောက်ရေးချင်တာနဲ့ ဘာရေးရမှန်းမသိတုန်း ဟိုနေ့က ရီထားတာလေးတွေပြန်ပေါ်လာလို့ပါ။ :hee:
မသဲနု မဖတ်​လိုက်​ရတဲ့ …
မိန်​းမများရဲ့ ပညက်​​တော်​ (၁၂ )ပါး
အာဟိ တူသပေါ့နော်။ တော်တော်တူတာပဲ။ ယောင်္ကျားမိန်းမတွေ အားလုံး ဒီအဖြစ်တွေ လူတိုင်းနီးပါးကြုံဖူးပုံရတယ်။
ဟီ ဟိ Wiki Leak ပြီးတော့ ၊ မွသဲ Leak ပေါ့…
ယောက်ျားများက အဲသည့်လို ကွိုင်ရှာတဲ့ မိန်းမဆို စိတ်ညစ်ပေမည့် အေးဆေး…
ရုပ်တည်နဲ့ မြုံစေ့မြုံစပ် အုံ့ပုန်းကိုမှ ကြောက်တာ… ဟု… ဆြာကြီးများက ဆို၏
ပြောစရာတွေ ရင်နဲ့ အပြည့်မို့။။
အဲ မေ့လို့ ယောက်ခမ သဲ။
သဲ ရဲ့ သားလေးကို ပညာမပြဘူးလို့နော်။
ချွေးမွလေး တားတားကို ဟင်းဘဲချက်ကျွေးနော် စိတ်ချဗရဇီ :hee:
ကိုယ့် အကြောင်းကိုယ် အတင်းပြောရတယ်လို့ သဲရယ်…
ဒါနဲ့လေ..အရင်တုံးကပေါ့ တို့လူကလေ .. .
ပညတ်တာတွေ ခံယူချင်လို့တဲ့ ..ဟုတ်ကဲ့ လို့ပြောချင်လို့တဲ့
တို့ မကြိုက်တာတွေကို လုပ်ပြတာတဲ့
ဒါတော့ သူ လိမ်ပြောတာ ဟုတ်လောက်ဘူးရယ်နော်…
မွအိတို့ ငယ်တုံးကလဲ ဒီလောက်မအပါဘူးလို့..အဲ့ဒါလေး
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးမွအိရယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေစုံတုန်း ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ၊ ကိုယ့်မိန်းမ သူ့မိန်းမတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရီပွဲဖွဲ့ရင်း နဲ့ရေးချင်စိတ်သွားတာရယ်ကြောင့်ရေး လိုက်တာပါ။ မိန်းမတွေအချင်ယောင်ဆောင်တာသူတို့ခံရတာလေးတွေလဲ စိတ်ကူးပေါက်ရင်လာပါမည်
မိန်းမ တွေများ မနပ်ချက်တော်။ ကိုယ်ကပထမဆုံး မဖြစ်ရလဲ နောက်ဆုံးဖြစ်ရတာကျေနပ်စရာပေါ့တော် ဟုတ်ဘူးလားတော့။ ကိုယ်ကအလည်ကလူမဖြစ်ပြီးတာပဲ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာဘယ်လောက်များ များကိုယ့်နောက်မှာ မရှိဖို့အရေးကြီးတာကို နားမလည်ချက်၊ “အ” ချက်တော့ပြောမနေပါနဲ့။
ဟုတ်တယ်လေ အဲဒါလေးကတော့ ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး အူယားလွန်းလို့ရေးလိုက်တာပါအေ။ ပထမမဖြစ်ရလို့ဆိုအမြဲပြသနာရှာနေတာလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ
မိန်းမများအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ ပါလားဗျ
အဲဒါကြောင့် ရှေးစာဆိုတွေ စပ်ခဲ့သပေါ့
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း တဲ့ (စာလုံးပေါင်းနည်းနည်းလွဲပါသည်)
အောင်မယ်လေးတော်လာဘာဦးမည် တော်ဒို့ယောင်္ကျားဒွေအကြောင်း စုလိုက်အုံးမည် :hint:
စုပေါင်းစပ်ပေါင်းတော့။ အထွေထွေ ဗဟုသုတာပေါ့အေ။ အများပြောဒါလေးတွေရေးထားတာရယ်။
အဟိ..ဆေးလိပ်ဘူးသိမ်းတာတော့ မှန်သဗျ…သိမ်းလေ ..လမ်းဘေးဆိုင်တွေများ ပေါလို့ …အဟိဟိ
အဟိ တော်တော်များများအတူတူချည်းပါပဲအေ။ ခေတ်အဆက်ဆက်ဒါမျိုးတွေချည်းပါပဲ။ ခပ်ဆင်ဆင်တွေပါပဲ။
သများတို့ကို လိုင်းလာပူးလို့ကတော့ ဆွဲဆုတ်ပျစ်စ်မယ်
အဲဒါတော့မှန်ဒလိုဘဲ သူကပိုရွဲ့ရင် ကိုယ်ပိုနာဖို့ရှိတယ်။ အင်းယောင်္ကျားဒွေလဲခက်ပါတယ်။ လိမ်ကိုမလိမ်မာ ဘူး။ လိုက်လိုက်ပြောနေရဒါရယ်။
အိုက်ဒါလဲ နားအေးခြင်းတပါးပဲ။ တချို့နားပူချင်သူများမဒေါ့ အတင်းကို အတင်းကို ကြွားကြွားနေကြဒဂေါ။
၂မျိုးစပ် မွသဲကို ပိုကြိုက်……..
အဟိ လုံမလေးမွန်မွန်ရေးကတဲက သဘောကျနေတာ။ လိုက်ဖက်မယ့်အကြောင်းအရာကလဲရှာရသေး ဆိုတော့ ဟိုနေ့က ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်တော့မှ သိလိုက်ရတာတွေကို ရွာထဲက အတင်းပြောတဲ့မိန်းမကြီးလိုလုပ်ရေးထားတယ်။
မိန်း တွေ မ ထား တဲ့ မိန်းမ တွေပါ ဗျာ
ဟေ နာမည်ပြောင်းပြန်ဘီလားအေ။ ညီးက အလုပ်ထွက်တော့ ဖွတ်တောင်ပြောင်ကရောလားအေ။ အိုက်လိုလုပ်ပါနဲ့အေ မိန်းမတော့ယူပါအုံး။ ပတ်ကညောနဲ့တွေ့ပီးဘီလား။ ဟိုကကော ပညတ်တော် အပါး ၁၀ဝ လားအေ။
ဟိုလူဂျီး ကွမ်းဖြတ်တဲ့ ကိတ်စန ပြန်လည် စိစစ်ရတော့မယ်။ စီနီယာတွေဆီက ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ သင်ယူပါအိ။
သာမီးကတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်လိုကိ ဟိုသီချင်းလေးဆိုပြလိုက်။ ဘာလဲသိလား။ အေသင်နေဝင်းလေ။ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ကိုကိုမို့လေ ဒီလိုဆိုးမိတာပါ. . . အဟိ
အင်းခြောက်ညက်နှာကွမ်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့ ချင့်ယုံအေချင့်ယုံ။ ( ကျပ်ပေးလိုက်တီ ) သာမီးကိုတော့ မချုပ်ချယ်ဇေနဲ့ မခံနဲ့သိလားသာမီး။ သူ့ကိုတော့ဆော်သာဆော်
ဘာမွှ မပေါဂျင်ဘူးးးနော် ….
သည်းလေး ကြားနိုင်အောင် ဘီလိုပေါပေါ ယုံနဲ့ ချစ်ဆုံးရေ …
ဖွဘုတ်မှာ အတင်းတုတ်နေတဲ့ မွသဲနုပါရွာထဲပြောင်းအတင်းတုတ်နေပြီ
အဟိ ကြိမ်စင်္ကြာကြောင့် မှီရာဆွဲ ပြေးလာရတာ ဦးမိုက်ရေ။ ရေးမိရေးရာရေးလိုက်တာ။
ကွန်းမန့်ပေးတာ နည်းနည်း နောက်ကျသွားတယ် မသည်းနုအေးရေ…။
ကွန်မင့်လေးနဲ့ချီးမြှင့်လို့ကျေးကျေးပါ ဦးဘလက်ရေ။ ဦးမိုက်ကြိမ်စင်္ကြာကြောင့် အပြေးအဖြန်းပြန်လာခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
ရေးထားတာကတော့ ကွက်တိပဲ ကွက်တိပဲ လို့ ပြောရမဲ့ကိန်း
“ကျုပ်ပြောမယ့်အတင်းကတော့ မိန်းမတွေအကြောင်း ပေါ့ရှင်။ မိန်းမတွေများမကောင်းချက်”
ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းမတွေ ကောင်းတယ်လို့ ထင်တာပဲ
(ဟုတ်တယ် မို့လား ကိုချော ကိုမိုက် ကိုကျောက် တို့ ရေ…)
ဟုတ်ပါ့ ကိုရင်နို… ထောက်ခံသွားပါတယ်…
ဂလို အကောင်းမပြောရင် ကွိုင်ရှာခံရလိမ့်မယ်… ဟီ ဟိ
အာဟိအာဟိ ထောက်လဲထောက်ခံ ကြောက်လဲကြောက်ပေါ့လေ တိဘာဒယ်တိဘာဒယ် မယခ အဲမွှားလို့ မယခတွေဘာ။ အိုက်ဒါကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့မိန်းမတွေအကြိုက်ဆုံးက ဦးဆာမိ ပြောဒလို ဝုတ်ကဲ့ဝုတ်ကဲ့ပေါ့
မိန်းမအကြောင်း ပေါင်းမှသိဒဲ့… လျှာပေးဂျဗာ တယောက်လောက်…
ရှာပေးဒေါ့လဲ ညင်းဒါဂိုး ခံပေါ့အေ